Pedro oo hal arin muhiim ah ugu baaqay saaxiibadiis kooxda Chelsea, kadib guuldaradii Manchester United – Gool FM
Pedro oo hal arin muhiim ah ugu baaqay saaxiibadiis kooxda Chelsea, kadib guuldaradii Manchester United
(Chelsea) 20 Feb 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea Pedro ayaa sheegay in xili ciyaareedkan uu noqday mid aad ugu adag, kadib markii ay ka hareen koobka FA Cup isniintii lasoo dhaafay.
Pedro ayaa saaxiibadiis kooxda Chelsea ugu baaqay inay daganaan muujiyaan, isla markaana ay dib u soo ceshadaan qaab ciyaareedkoodii ugu fiicnaa, labada kulan soo aadan ay ciyaari doonaan, si ay u bedelaan xaalada adag ay ku jiraan.
Kooxda Chelsea ayaa guuldaro 2-0 ah kala kulantay dhigeeda Manchester United kulnkii wareega 5-aad koobka FA Cup-ka ay ku wada ciyaareen isniintii lasoo dhaafay garoonka Stamford Bridge, taasoo cadaadiska ku sii kordhisay tababare Maurizio Sarri.
Xidiga reer Spain ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray inaysan jirin waqti ay ku ooyaan xiligan, xili Blues ay ciyaari doonto laba kulan muhiim ee kala ah UEFA Europa League iyo finalka Carabao Cup ay kula ciyaari doonaan kooxda Manchester City.
“Waxyaabaha ugu muhiimsan haatan waa inaan daganaan muujinaa, isla markaana tababar xoogan sameynaa”.
“Waa inaan sida ugu fiican dib ugu helnaa awoodeena ciyaareed, hadii aysan sidaas dhicina, kooxda waxay ku jiri doontaa dhibaato”.
“Waxaa ina sugaya kulan muhiim ah ee inooga horeeya koobka Europa League, waana kulanka finalka Carabao Cup ee aan kula ciyaari doono Manchester City”.
“Wenger waa mid ka mid ah macalimiinta ugu fiican taariikhda” - Mourinho